သစ်သီးဖျော်ရည်သောက်သုံးခြင်းဟာ အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးနိုင်ခြေများကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
သင်ဇာဝင့်ကျော် တောက်တောက်ပပလှနေလွန်းတဲ့ အနီရောင်လေးနဲ့ မိုက်လွန်းနေတယ်….... July 18, 2019
သမီးလေးနဲ့အတူ ရိုက်ထားတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရ... July 18, 2019
ပါးရည်​​တွေ တွန့်​​လိမ်​​နေတဲ့ ပုံရိပ်​ကို ချပြလိုက်​တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး... July 18, 2019
ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့တနေ့တာဟောစာတမ်း (19.7.2019)... July 18, 2019
Manchester မှာခပ်မိုက်မိုက်လန်းနေတဲ့ ခင်လေးနွယ်... July 17, 2019
သစ်သီးဖျော်ရည်သောက်သုံးခြင်းဟာ အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးနိုင်ခြေများကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်….
May 30, 20190720
<<< Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် >>>
သစ်သီးဖျော်ရည်သောက်သုံးတာဟာ အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ ယူဆဖွယ်ရာပါ။ လူတွေက သကြားအချိုရည်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အဖျော်တွေကို သောက်သုံးမယ့်အစား အသီးဖျော်ရည်တွေဟာ အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ ယူဆလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ဗံပညာကတော့ အသီးဖျော်ရည်တွေကို အချိန်ကြာကြာသောက်လေလေ ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လေလေပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ JAMA ဂျာနယ်က လေ့လာချက်အရတော့ (၁၀၀) ရာခိုင်နှူန်း အသီးစစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖျော်ရည်တွေမှာတောင် အခြားအချိုများတဲ့ ကိုလာ၊ လစ်မနိတ်နဲ့ အခြားသကြားထည့်ထားတဲ့ သောက်စရာတွေလိုပဲ ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီး အမေရိကန်ပေါင်း (၁၃,၄၀၀) ကျော်ကို လေ့လာပြီးနောက်မှာတော့ နေ့တိုင်း သစ်သီးဖျော်ရည်(၁၂) အောင်စကို သောက်လေ့ရှိသူတွေဟာ ပိုမိုစောစီးစွာ သေဆုံးရန်ရာခိုင်နှူန်း (၂၄) ရာခိုင်နှူန်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုတော့ သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခုတည်းကြောင့်ချည်းမဟုတ်ပဲ အခြားအကြောင်းမျိုးစုံပါ ခြုံငုံပြီးမှ ကောက်ချက်ချထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သစ်သီးဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးလိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က သကြားကို ခြေဖျက်ရတဲ့ ဇီဝလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အအေးတစ်ဘူးကို သောက်ပြီးလို့ ခန္ဓာကိုယ်က သကြားကို ခြေချက်ရတဲ့ ဇီဝလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အတူတူဖြစ်ကြောင်း JAMA ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သကြားတွေအများကြီးပါတဲ့ ဖျော်ရည် သို့မဟုတ် အချိုရည်ကိုသောက်သုံးလိုက်တဲ့အခါ အချိုတွေဟာ အသည်းဆီကို တဟုန်ထိုးပြေးဝင်သွားပါတယ်။ ဖျော်ရည်သောက်တာနဲ့ အသီးစားတာနဲ့တောင် မတူပါဘူး။ သစ်သီးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အသီးထဲမှာပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေပါ တစ်ခါတည်းစားသုံးမိတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗိုက်ပြည့်စေတဲ့အပြင် စိတ်ကျေနပ်မှူကိုပါ ရရှိစေပါတယ်။
သစ်သီးဖျော်ရည်တွေမှာတော့ အခြေခံအားဖြင့် သကြားအချိုဓာတ်နဲ့ ရေပဲပါပြီး ပရိုတိန်းဓာတ်လည်း မပါ၊ အဆီဓာတ်လည်း မပါတာကြောင့် ကိုယ်တွင်းဇီဝစနစ် ခြေဖျက်တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက် ကောင်းကျိုးမရှိပါဘူး။ ဖျော်ရည်တွေကို သောက်ပါများလာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ ရောင်ယမ်းတာ၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါတွေ ၀င်လာနိုင်တာနဲ့ ၀မ်းဗိုက်အဆီစုတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ထဲမှာ အချိုဓာတ်တွေများလာတဲ့အတွက် ကင်ဆာ၊ အသဲအဆီဖုံးခြင်း၊ သွားပျက်စီးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနဲ့ နှလုံးပြဿနာတွေလည်း ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။
အသီးဖျော်ရည်သက်သက်ကြီး သောက်မယ့်အစား အသီးတစ်ခုလုံးစားပေးခြင်း၊ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်သုံးပေးခြင်းက နှလုံးအတွက် ပိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သိပ္ဗံပညာရှင်တွေဟာ အသီးစားသုံးသူနဲ့ အသီးဖျော်ရည်သောက်သုံးသူတွေကို လေ့လာကြည့်ရာမှာ နေ့စဉ်အသီးဖျော်ရည်သောက်သုံးသူတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ(၇) ရာခိုင်နှူန်း မြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သစ်သီးကို ဒီအတိုင်းစားသုံးသူတွေမှာတော့ အခုလို ဆီးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှူရှိနေတဲ့ပုံမျိုး မတွေ့ရပါဘူး။
သစ်သီးစိတ်တွေမှာ အမျှင်ဓာတ်၊ အင်တီအောက်ဆီးဒန့်တွေပါဝင်ပြီး (၁၀၀) ရာခိုင်နှူန်း အသီးစစ်စစ်ဖျော်ရည်တွေထက် သကြား(၃၅) ရာခိုင်နှူန်း လျော့နည်းစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးဆိုရင် လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာ အမျှင်ဓာတ်လိုအပ်ချက် (၂၀) ရာခိုင်နှူန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည်တွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို (၈) အောင်စ အောက် လျော့နည်းပြီးသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရေကို ဒီတိုင်းသောက်ရတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံလေးတွေကို ခဲထားပြီး ရေခဲတုံးနေရာမှာ အစားထိုးသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
<<< Unicode ဖှငြ့ဖတရြနြ >>>
သစသြီးဖွောရြညသြောကသြုံးတာဟာ အသကရြှညကြနြွးမာစှာနထေိုငနြိုငဖြို့ နညြးလမြးကောငြးတစခြုလို့ ယူဆဖှယရြာပါ။ လူတှကေ သကှားအခွိုရညတြှနေဲ့ ထုတလြုပထြားတဲ့ အဖွောတြှကေို သောကသြုံးမယြ့အစား အသီးဖွောရြညတြှဟော အနျတရာယကြငြးတယလြို့ ယူဆလရှေိ့ပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ သိပျဗံပညာကတော့ အသီးဖွောရြညတြှကေို အခွိနကြှာကှာသောကလြလေေ ကနြွးမာရေးကို အနျတရာယဖြှစနြိုငလြလပေေါပဲလို့ ဆိုပါတယြ။ JAMA ဂွာနယကြ လလေ့ာခကွအြရတော့ (၁၀၀) ရာခိုငြနြှူနြး အသီးစစစြစနြဲ့ ပှုလုပထြားတဲ့ ဖွောရြညတြှမှောတောငြ အခှားအခွိုမွားတဲ့ ကိုလာ၊ လစမြနိတနြဲ့ အခှားသကှားထညြ့ထားတဲ့ သောကစြရာတှလေိုပဲ ကနြွးမာရေးကို အနျတရာယဖြှစစြနေိုငကြှောငြး ဆိုပါတယြ။
အရှယရြောကပြှီး အမရေိကနပြေါငြး (၁၃,၄၀၀) ကွောကြို လလေ့ာပှီးနောကမြှာတော့ နတေို့ငြး သစသြီးဖွောရြညြ(၁၂) အောငစြကို သောကလြရှေိ့သူတှဟော ပိုမိုစောစီးစှာ သဆေုံးရနရြာခိုငနြှူနြး (၂၄) ရာခိုငနြှူနြး ရှိတယလြို့ သိရပါတယြ။ ဒီသုံးသပခြကွကြိုတော့ သစသြီးဖွောရြညတြစခြုတညြးကှောငြ့ခညြွးမဟုတပြဲ အခှားအကှောငြးမွိုးစုံပါ ခှုံငုံပှီးမှ ကောကခြကွခြထွားတာ ဖှစပြါတယြ။ အထူးသဖှငြ့ သစသြီးဖွောရြညကြို သောကသြုံးလိုကတြဲ့အခါ ခနျဓာကိုယကြ သကှားကို ခှဖကွေရြတဲ့ ဇီဝလုပဆြောငခြကွဟြာ အအေးတစဘြူးကို သောကပြှီးလို့ ခနျဓာကိုယကြ သကှားကို ခှခကွေရြတဲ့ ဇီဝလုပဆြောငခြကွနြဲ့ အတူတူဖှစကြှောငြး JAMA ဂွာနယမြှာ ဖောပြှထားပါတယြ။
သကှားတှအမွေားကှီးပါတဲ့ ဖွောရြညြ သို့မဟုတြ အခွိုရညကြိုသောကသြုံးလိုကတြဲ့အခါ အခွိုတှဟော အသညြးဆီကို တဟုနထြိုးပှေးဝငသြှားပါတယြ။ ဖွောရြညသြောကတြာနဲ့ အသီးစားတာနဲ့တောငြ မတူပါဘူး။ သစသြီးစားလိုကတြဲ့အခါမှာတော့ အသီးထဲမှာပါတဲ့ အမွှငဓြာတတြှပေါ တစခြါတညြးစားသုံးမိတာ ဖှစတြဲ့အတှကြ ဗိုကပြှညြ့စတေဲ့အပှငြ စိတကြွနပေမြှူကိုပါ ရရှိစပေါတယြ။
သစသြီးဖွောရြညတြှမှောတော့ အခှခေံအားဖှငြ့ သကှားအခွိုဓာတနြဲ့ ရပေဲပါပှီး ပရိုတိနြးဓာတလြညြး မပါ၊ အဆီဓာတလြညြး မပါတာကှောငြ့ ကိုယတြှငြးဇီဝစနစြ ခှဖကွေတြဲ့ဖှစစြဉအြတှကြ ကောငြးကွိုးမရှိပါဘူး။ ဖွောရြညတြှကေို သောကပြါမွားလာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယတြှငြးအငျြဂါတှေ ရောငယြမြးတာ၊ ဆီးခွိုသှေးခွိုရောဂါတှေ ဝငလြာနိုငတြာနဲ့ ဝမြးဗိုကအြဆီစုတာတှေ ဖှစလြာပါတယြ။ ဒါ့အပှငြ ကိုယထြဲမှာ အခွိုဓာတတြှမွေားလာတဲ့အတှကြ ကငဆြာ၊ အသဲအဆီဖုံးခှငြး၊ သှားပကွစြီးခှငြး၊ ကိုယအြလေးခွိနတြိုးခှငြးနဲ့ နှလုံးပှဿနာတှလညြေး ဖှစပြှားလာနိုငပြါတယြ။
အသီးဖွောရြညသြကသြကကြှီး သောကမြယြ့အစား အသီးတစခြုလုံးစားပေးခှငြး၊ ကောဖြီ သို့မဟုတြ လကဖြကရြညတြစခြှကြ သောကသြုံးပေးခှငြးက နှလုံးအတှကြ ပိုကောငြးမှနစြတယေလြို့ သိရပါတယြ။ သိပျဗံပညာရှငတြှဟော အသီးစားသုံးသူနဲ့ အသီးဖွောရြညသြောကသြုံးသူတှကေို လလေ့ာကှညြ့ရာမှာ နစေ့ဉအြသီးဖွောရြညသြောကသြုံးသူတှမှော ဆီးခွိုရောဂါဖှစပြှားနိုငခြှေ(၇) ရာခိုငနြှူနြး မှငြ့တကနြတောကို တှရေ့ပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ သစသြီးကို ဒီအတိုငြးစားသုံးသူတှမှောတော့ အခုလို ဆီးခွိုရောဂါနဲ့ ပတသြကဆြကနြှယမြှူရှိနတေဲ့ပုံမွိုး မတှရေ့ပါဘူး။
သစသြီးစိတတြှမှော အမွှငဓြာတြ၊ အငတြီအောကဆြီးဒနြ့တှပေါဝငပြှီး (၁၀၀) ရာခိုငြနြှူနြး အသီးစစစြစဖြွောရြညတြှထကြေ သကှား(၃၅) ရာခိုငနြှူနြး လွော့နညြးစှာ ပါဝငပြါတယြ။ ဥပမာ ငှကပြွောသီးတစလြုံးဆိုရငြ လူတစယြောကအြတှကြ တစနြတေ့ာ အမွှငဓြာတလြိုအြပခြကြွ (၂၀) ရာခိုငနြှူနြးပေးနိုငပြါတယြ။ အသီးဖွောရြညတြှကေို ကှိုကတြယဆြိုရငတြော့ တစနြကေို့ (၈) အောငစြ အောကြ လွော့နညြးပှီးသာ သောကသြုံးသငြ့ပါတယြ။ တကယလြို့ ရကေို ဒီတိုငြးသောကရြတာ မကှိုကဘြူးဆိုရငလြညြး လတဆြတတြဲ့ အသီးအနှံလေးတှကေို ခဲထားပှီး ရခေဲတုံးနရောမှာ အစားထိုးသောကသြုံးနိုငပြါတယြ။
Ref : insider, relish, dailymail
သာယာနေတဲ့ကမ္ဘာထဲ မမျှော်လင့်ဘဲ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသူများအကြောင်းကို လေ့လာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
နေတိုးနဲ့အတူ ဂျပန်မလေးလိုပြင်ပြီး ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်
သင်ဇာဝင့်ကျော် တောက်တောက်ပပလှနေလွန်းတဲ့ အနီရောင်လေးနဲ့ မိုက်လွန်းနေတယ်….
သမီးလေးနဲ့အတူ ရိုက်ထားတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
ပါးရည်​​တွေ တွန့်​​လိမ်​​နေတဲ့ ပုံရိပ်​ကို ချပြလိုက်​တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး